Abakhiqizi be-Dead End Grip & Abahlinzeki - China Dead End Grip Factory
I-Dead end grip okunye okubizwa ngokuthi i-preformed wire grips, ithuthukiswa ukuze isetshenziswe kumanethiwekhi amaningi ezokuxhumana ngocingo noma ulayini wokusabalalisa amandla kagesi kumakhondaktha angenalutho nangama-insured emibhoshongweni noma ezigxotsheni zokhuni.
Uhla lomkhiqizo wemikhiqizo yokubamba efile ifaka phakathi:
1) i-ADSS cable guy grips,
2) ADSS ikhebula ukumiswa ukubambelela
3) Strand wire guy uyabambelela.
Zenziwe ngensimbi eshisayo yensimbi ehlanganisiwe futhi imbozwe isihlabathi esikhethekile ne-glue ukwenza ngcono ukungqubuzana phakathi kwabaqhubi abavikela futhi baqinise izintambo ezigxotsheni zasemoyeni.
I-Jera iyakwazi ukuthuthukisa ukubambelela kokufa ngokuya ngemininingwane yekhebula lakho ngesikhathi esifushane futhi ngaphandle kwezindleko ezingeziwe.
Yonke imikhono yethu yokufa ihlolwe ngokubambisana kwezinsiza zikagesi nezokuxhumana ngocingo ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo wethu uhlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu. Ilabhorethri yethu yangaphakathi iyakwazi ukuqhubeka nolu chungechunge lwezinhlobo ezijwayelekile zokuhlolwa kohlobo olufana + 70 ℃ ~ -40 ℃ lokushisa kanye nomswakama isivivinyo sokuhamba ngebhayisikili, isivivinyo sokuqina samandla amakhulu, isivivinyo sokuguga kagesi njll.
UJera uyinkampani ekhulayo, sichitha isikhathi esiningi namandla ukwenza ngcono uhla lomkhiqizo wethu ukuze sanelise izidingo ezahlukahlukene ezivela ezimakethe zomhlaba.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane.
ADSS Ikhebula Ukumiswa Grip
ADSS Ikhebula Guy Grip